सुशान्तकी प्रेमिका रिया पुलिससँग किन भागिरहेकी छन्? – सडक मिडिया
सडक मिडिया August 4, 2020 0
दुई महिना पुग्न लागिसक्दा पनि सुशान्त सिंह आत्मह’त्या के’स सुल्झिन सकिरहेको छैन। अहिलेसम्म मुम्बई पुलिसले सुशान्तको के’समा कुनै सफलता हाँसिल गर्न सकेको छैन। बिहार पुलिसले मुम्बई पुलिससँग मद्दतको माग गरिरहेको छ तर मुम्बई पुलिसको हात खाली छ।
हालसम्म पुलिसले सुशान्तका परिवार, आफन्त, साथीभाइ, कुक, बडिगार्ड, डक्टर आदि गरि तीसभन्दा बढी मान्छेको बयान लिइसकेको छ। तर केही ठोस कुरा फेला पार्न सकेको छैन।
सुशान्तको के’समा सबैभन्दा बढी पुलिसलाई मद्दत गर्न कोही छ भने ती हुन्, सुशान्तकी कथित प्रेमिका रिया चक्रवर्ती। रियाले केही दिन पहिले आफूलाई सुशान्तकी प्रेमिका बताउँदै उनको के’समा सिबिआइ जाँचको हुनुपर्ने माग राख्दै भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहसमक्ष निवेदन पेस गरेकी थिइन्।
सुशान्त र रिया साथै बस्ने भएकोले पुलिसले रियासँग सुशान्तको बारेमा सोधपुछ गर्न खोजिरहेको छ। तर रिया पुलिसलाई मद्दत गर्नुको साटो पुलिससँग भागिरहेकी छन्। बिहार पुलिसले रियालाई खोजिरहेको ६ दिन बढी भैसकेको छ तर रिया बे’पत्ता छिन्। पुलिस उनको घर पुग्दा रिया घरमा थिइनन्। न त उनीसँग फोनमा नै कुरा गर्न सम्भव भयो।
यद्यपि यस बिचमा रियाले आफ्नो एउटा भिडियो बनाएर सोसल मिडियामा पोस्ट गरेकी थिइन्। भिडियोमा उनले आफूलाई कानुनप्रति विश्वास भएको र सत्यको जीत हुने कुरा बनाएकी थिइन्। तर रिया यति नै सत्यवान् छिन् भने पुलिससँग किन भागिरहेकी छन्? यो प्रश्न यतिबेला सबैले गरिरहेका छन्।
Previous Post: काठमाडौंमा थप ६२ जनामा कोरोना
Next Post: कार्टुनमा राखिएको शिशुको आमाले रुँदै वास्तविकता बताइन – भिडियो हेर्नुहोस्
आन्तरिक उडान साेमबारदेखी खुल्ने, यस्ताे छ भाडादर… (तालिकासहित) 6,070 views
सुशान्त प्रकरण: रिया आफैले गरिन् ड’रलाग्दो खु’लासा 3,992 views